[Baarlamanka Soomaaliya] ma keeni karan mooshin ku saabsab su'aalo weydiin ku socota Farmaajo oo aan ka hadlin shantii sano ee la soo dhaafay ?
Wednesday May 11, 2022 - 13:08:59 in Wararka by Ali Adan
(Waagacusub Uk) Ugu yaraan 10 su'aalood ayaa ka dhex guuxaya shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay sugayeen maalin uun in looga jawaabo Dadweynaha. Su'aalaha cid walba ay tabayso jawaabahooda, waxaa ka mid ah:-
(Waagacusub Uk) Ugu yaraan 10 su'aalood ayaa ka dhex guuxaya shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo ay sugayeen maalin uun in looga jawaabo Dadweynaha. Su'aalaha cid walba ay tabayso jawaabahooda, waxaa ka mid ah:- 1:-Dhiibistii Qalbi-Dhagax cidda qaadanaysa masuuliyaddiisa saxda ah?
2:-Ujeedka loo weeraray Cabdiraxman Cabdishakur iyo Cidda leh masuuliyadda weerarka?
3:-Sababta kaliftay in dhaqaale iyo Siyaasad ahaan loo cunaqabateeyo, A. Somaliland, B. Jubbaland, C. Puntland?
4:-Ciidamadii loo qaaday Eritarea, A. Tiradooda, B. Sababta loo geeyay, C. Ma runbaa in ay ka qeyb galeen Dagaalkii Ethopia, D. Meeqaa nool ama geeriyootay, E. Maxaa loo soo celin waayay?, F. Waalidiintii cabanayay maxaa loo qancin waayay?
5:- Ka jawaabidda cidda dishay iyo sababta loo dilay 1- Ikraan Tahaliil, 2- Xildhiban Amina Maxamed, 3- Eng Yariisoow?
6:- Maaliyadda dalka oo wax xisaab celin ah aanan lagu sameyn Shantii sano ee Farmaajo Afar ka mid ah?
7:- Sababtee ayay Dowladdu ku dooratay Xiriir wanaajinta Eritrea oo misna ay ku diiday Xiriirka iyo Walaalnimada DJabuti?
Su’aalahaan iyo kuwa kale oo badan waxa ay aad muhiim ugu tahay Ummadda Soomaaliyeed in ay helaan jawaabohooda.
Farmaajo hurdada ka kac oo dadka la hadal.